Global Voices teny Malagasy » Somalia Speaks: Manamafy Ny Feon’Ireo Somaliana Tsy Misy Mpihaino · Global Voices teny Malagasy » Print
Somalia Speaks: Manamafy Ny Feon'Ireo Somaliana Tsy Misy Mpihaino
Voadika ny 10 Febroary 2012 5:00 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika miora
Iray amin'ireo firenena an-dalam-pandrosoana izay miafara any anatin'ny tontolon'ny media noho antony ratsy i Somalia: ady sivily, kere, haintany, ireo piraty Somaliana raha tsy hanonona afatsy vitsivitsy. Miaraka amin'ny fanampiana entin'ny sehatra fifanakalozana mipetraka ao amin'ny Ushahidi “Somalia Speaks “, manangona feo tsy misy mpihaino avy ao Somalia ny Al Jazeera amin'ny teny Anglisy amin'ny alàlan'ny SMS. Avadika ho amin'ny teny Anglisy ireo valinteny ary amin'ny farany dia raketina anaty sarintany. Afaka mandefa tatitra avy amin'ny alàlan'ny SMS amina laharana iraisam-pirenena ihany koa ny olona ary mandefa tsikera ao amin'ny aterineto ka anisan'izany ireo rohinà lahatsary, fampiakarana saripika, sy fanoritsoritana ny lahatsoratra.
Ny Somalia Speaks dia fiaraha-miasa eo amin'ny Souktel , ONG iray manome ireo tolotra fandefasana SMS, Ushahidi , Al Jazeera , Crowdflower , sy ilay Ivontoeran'ny Vondom-piarahamonin'ny Afrikana ivelan'ny tanindrazany.
Manazava i Patrick Meier avy ao amin'ny Ushahidi anatina lahatsoratra iray ao amin'ny bilaogin'ny Ushahidi  fa:
Ny tanjon'ity tetikasa ity dia ny fampifantohana ny sain'ny media eran-tany amin'i Somalia avy amin'ny famelàna ireo feo Somaliana hahazo toerana eo afovoan'ny sehatra—feo izay tsy heno any amin'ny media mahazatra, iraisam-pirenena. Raha tsy miresaka momba an'i Somalia ireo mpanao gazety, manasa ireo Somaliana hiresaka mivantana amin'izao tontolo izao ity tetikasa ity. Ity tetikasa ity dia manasongadina ireo feo ireo aminà sarintanin'izao tontolo izao mivantana sy misokatra ho an'ny daholobe mba hijoroana ho vavolombelona sy hirotsahana anatina adihevitra ao amin'ny aterineto miaraka amin'ireo vahoaka Somaliana, adihevitra izay ahafahana indrindra ireo Somaliana sy ny vondrom-piarahamonin'ireo teratany ivelan'ny tanindrazana. Ny tena faniriako goavana indrindra dia ny hahafahan'ny vondrona fisoloana vava sy ny mpanasa atidoha hahazo tombontsoa amin'ity tetikasa ity ka hampitombo roa avo heny ny ezaka ataony ho setrin'ny fiakaran'ny krizy any Somalia.
Nametraka ny fanontaniana hoe “Ahoana ny fiatraikan'ny Fifandirana ao Somalia teo amin'ny fiainanao?” amin'ny teny Somaliana ny Souktel izay napetrany tamin'ireo mpanaraka azy miisa eo amin'ny 5,000 any amin'ireo faritra ara-jeografika tsy dia mahazo famatsiam-bola. Nahazo valiny an-tsoratra mihoatra ny 3000 ny Somalia Speaks, izay nadika, nosokajiana sy napetraka ara-jeografika tamin'ny alàlan'ny fampiasàna ity ‘plugin’ crowdflower  ity. Mitatitra ny Co.exist  ka manonona an'i Riyaad Minty, lohandohan'ny media sosialy Al Jazeera, amin'ny fomba fiasàn'ny ‘crowdsourcing’, na fitrandrahana vaovao avy eny ifotony. Mahatalanjona ireo valiny azo avy amin'ny vondrom-piarahamonina miteny ny teny Somaliana ao amin'ny aterineto, izay nirotsaka an-tsitrapo handika ireo tatitra avy amin'ny SMS. Misy ihany koa ny rohy mampifandray ireo tatitra an-tsarintany ireo sy ny sehatra fifanakalozan-kevitra ho an'ny daholobe ahafahan'ireo mpamaky mamaly sy mizara ny fomba fijeriny.
Mitatitra i Melissa Ulbricht ao amin'ny PBS's Mediashift :
Korenblum ao amin'ny Souktel dia nilaza fa tanatina vanim-potoana nandritra ny dimy taona mankany amin'ny 2009, niakatra ho 1.600% ny salan'ny fidiran'ny finday tany amin'ny faritr'i Somalia; nanome tolotra tany amin'ny Tandrok'i Afrika ny Souktel hatramin'ny 2008 ary manana lisitra mpikambana amin'ny SMS mihoatra ny olona 50.000. [..] Ny fanakàran ireo olom-pirenena avy amin'ny alàlan'ny SMS izany, dia misy dikany.
Nilaza i Soud Hyder ao amin'ny Al Jazeera fa mitady ny fomba hitrandrahana araka ny tokony ho izy ny fanangonam-baovao mba hahazoana vaovao mivantana azy any amin'ny vahoaka: “Tahaka ny fitondràna ny fanaovan-gazetim-bahoaka ho amin'ny dingana manaraka izany.”
Mpamaky iray, Awaale, nitsikera  tao amin'ny bilaogin'ny Ushahidi fa takatry ny vahoaka Somaliana fa eo amin'olona roa fotsiny ny SMS. Araka izany dia mety hamaly ny SMS avy amin'ny Souktel izy ireo nefa tsy mahalala fa hipoitra ao anatin'ny Aterineto ny anaran'izy ireo ka mety hitondra azy ireo any amin'ny mpitari-tafika. Nomena toky izy fa nofafan'ny ekipan'ny Al-jazeera daholo ireo anarana manokana avy ao amin'ilay vohikala ho an'ny daholobe.
Ny Mobile Media Toolkit dia manana fandalinana feno  mikasika ity tetikasa ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/02/10/28217/
 Somalia Speaks: http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/somaliaconflict/somaliaspeaks.html
 Al Jazeera: http://www.aljazeera.com/
 lahatsoratra iray ao amin'ny bilaogin'ny Ushahidi: http://blog.ushahidi.com/index.php/2011/12/08/somalia-speaks/
 PBS's Mediashift: http://www.pbs.org/idealab/2012/01/al-jazeera-ushahidi-join-in-project-to-connect-somalia-diaspora-via-sms003.html
 fandalinana feno: http://www.mobilemediatoolkit.org/somalia-speaks-sharing-stories-horn-africa